Tamin'ny faran'ny taona 2009, nitelefaonina nanerana an'i Rwanda ny finday. Ho fanampin'ireo antso an-tapitrisany avy amin'ny fianakaviana, namana ary mpandraharaha ara-barotra, manodidina ny 1000 Rwandans dia nahazo antso avy amin'i Joshua Blumenstock sy ireo mpiara-miasa aminy. Ireo mpikaroka ireo dia nianatra momba ny harena sy ny fahantrana tamin'ny fanadihadiana ny santionan'ny olona avy amin'ny tahiry mpanjifa 1.5 tapitrisa avy amin'ny mpamatsy finday lehibe indrindra ao Rwanda. Flowersstock sy ireo mpiara-miasa dia nanontany ny olona voafantina fa raha te handray anjara amin'ny fanadihadiana izy ireo, dia nanazava ny toetoetry ny fikarohana azy ireo, ary avy eo nametraka fanontaniana maromaro mikasika ny toetrany ara-demôkratika, sosialy ary toekarena.
Ny zavatra efa nolazaiko hatramin'izao dia mampiseho izany feo izany tahaka ny fanadihadiana ara-tsosialy amin'ny siansa. Fa ny zavatra manaraka dia tsy nentim-paharazana - farafaharatsiny mbola tsy. Ankoatra ny angon-drakitra, ny Florentstock sy ireo mpiara-miasa dia nahazo ny rakitsoratra feno ho an'ny olona 1.5 tapitrisa. Ny fampifandraisana ireo loharanom-baovao roa ireo, dia nampiasa ny angona fanadihadiana izy ireo mba hampiofanana modely fianarana milina mba haminaniany ny harenan'ny olona mifototra amin'ny rakitsoratra antsoin'izy ireo. Avy eo dia nampiasa an'io modely io izy ireo mba handinihana ny harenan'ireo mpanjifa 1,5 tapitrisa ao amin'ny tahiry. Nanombana ihany koa ny toeram-ponenan'ny mpanjifany 1.5 tapitrisa amin'ny fampiasana ny fampahalalana ara-jeografia voarakitra ao anaty rakitsoratra antso. Ny fampidirana izany rehetra izany-ny harena voajanahary sy ny toeram-ponenana azo antoka-dia afaka namokatra sarintany avo lenta momba ny fizarana ny harena tany Rwanda. Amin'ny ankapobeny, afaka manome harena fitomboana ho an'ny tsirairay avy amin'ireo sela 2 240 ao Rwanda, vondrona kely indrindra ao amin'ny firenena.
Indrisy anefa, tsy azo atao ny manamarina ny fahamarinan'izany tombanana izany satria tsy nisy olona namorona tombanana ho an'ny faritra kely ara-jeografika any Rwanda. Saingy rehefa nametraka ny tombantombany tamin'ireo distrika 30 ao Rwanda i Blumenstock sy ny mpiara-miasa, dia hitan'izy ireo fa mitovy ny tombantomban'ny tetikasa Demografika sy ny Fahasalamana, izay heverina ho toy ny volamena ny fanadihadiana any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana. Na dia nanombantombana toy izany aza ireo fomba roa ireo tamin'ity tranga ity, ny fifanakaikezan'ny Blumenstock sy ny mpiara-miasa dia 10 heny haingana ary 50 heny noho ny fandinihana ara-demokratika sy ara-pahasalamana nentim-paharazana. Ireo tombatombana haingana sy haingam-pamokarana dia mamorona fomba vaovao ho an'ny mpikaroka, governemanta ary orinasa (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) .
Ity fandinihana ity dia toy ny fitsapana rorschach Rorschach: ny zavatra hitan'ny olona dia miankina amin'ny fiaviany. Mpahay siansa sosialy maro no mahita fitaovana fitadiavana vaovao izay azo ampiasaina mba handinihana ny teoria momba ny fampandrosoana ara-toekarena. Mpahay siansa maromaro no mahita fahombiazana momba ny fianarana maotina. Betsaka ny mpandraharaha no mahita fomba goavana hanakalozana lanjany amin'ny rakitra lehibe efa nomaniny. Mpitsoa -ponenana tsy miankina maro no mahita fampahatsiahivana mahatsikaiky fa miaina amin'ny fotoana fanaraha-maso betsaka isika. Ary farany, maro amin'ireo mpanao politika no mahita fomba iray ahafahan'ny teknolojia vaovao manampy amin'ny fananganana tontolo tsaratsara kokoa. Raha ny marina, ity zavatra nodinihina ity dia ireo zavatra rehetra ireo, ary satria manana io toetra mifangaro io izy, dia hitako ho varavarankely ho an'ny ho avy ny fikarohana sosialy.